China LEDD700 Ceiling Type LED Single Arm Operation Light miaraka amin'ireo mpanamboatra sy mpamatsy horonan-tsary | Wanyu
Momba an'i Wanyu
Latabatra fiasan'ny teknika
Latabatra miasa amin'ny herinaratra
Karazana moto elektrika
Karazana Hydraulika elektrika
Tabila fiasana gynecological
Latabatra fiasan'ny Ophthalmic
LEDD700 Ceiling Type LED Single Arm Operation Light miaraka amin'ny Video Camera
Ny jiro fiasa LED700 LED dia misy amin'ny fomba telo, valindrihana valindrihana, finday ary rindrina.
LEDL700 dia manondro jiro fiasan'ny valindrihana LED tokana.
Ny mpitazona hazavana LED dia manana savaivony 700mm sy 120 umram Osram. Ny takelaka hazavana translucent dia mahatonga ny jiro ho malefaka ary tsy mahavariana. Ny fahazavana dia mahatratra 160.000 lux, ny maripana miloko dia 3500-5000K, ary ny CRI dia 85-95Ra, izay azo ahitsy amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD, misy ambaratonga 10 azo ovaina. Ny sandry fampiatoana dia vita amin'ny karazan-tsolika alimina alimina vaovao, izay maivana sy mora mihetsika tsy misy atahorana ny harafesina. Ny famatsiana herinaratra mifamadika dia marika fanta-daza miaraka amin'ny rafitra fiarovana faribolana izay tsy hiteraka fahavoazana eo amin'ny faritra.
■ fandidiana kibo / ankapobeny
■ fandidiana fo / lalan-drà / vavony
■ traumatology / vonjy maika OR
■ urology / TURP
■ ent / Ophthalmology
■ endoscopy Angiography
1. Fampisehoana afaka aloka
Ilay mitazona jiro arc, famolavolana loharano hazavana marobe, hatramin'ny takamoa LED 120, hazavana fanamiana 360 degre amin'ny zavatra hita, tsy misy matoatoa. Na dia sakanana aza ny ampahany aminy dia tsy hisy fiatraikany amin'ny fandidiana ny famenon'ireo andry maro hafa.
2. Fanazavana lalina
Ny jiro fiasan'ny LED dia manana fahasimbana maherin'ny 90% eo amin'ny farany ambanin'ny sehatry ny fandidiana, noho izany dia ilaina ny fanazavana be mba hiantohana ny jiro miorina. Ity jiro fiasan'ny LED ity dia afaka manome hazavana hatramin'ny 160,000 ary hatramin'ny halalin'ny fahazavana 1400mm. Ny jiro fandidiana LEDD700 dia afaka mamaly ny filan'ny fandidiana lehibe.
3. Lensa novolavolain'ny tena
Tsy mitovy amin'ireo mpamokatra hafa izay mividy solomaso tsotra, dia manambola be izahay mba hampivelatra ny mason-tsivana tsy manam-paharoa amin'ny fampisehoana condensing tsara kokoa. Tela-jiro LED misaraka miaraka amin'ny solomaso misy azy, mamorona sahan-jiro azy manokana. Ny fipetrahan'ny tara-pahazavana samihafa dia mahatonga ny jiro fiasan'ny jiro tsy hitovy kokoa ary mampihena be ny tahan'ny aloka.
4. Panel fanaraha-maso LCD Touchscreen
Ny mari-pana amin'ny loko, ny hamafin'ny jiro ary ny fanondroana loko ny jiro fiasan'ny LED dia azo ovaina miaraka amin'ny alàlan'ny tontonana fanaraha-maso LCD.
5. Endo Mode
Ny jiro endoscope manokana dia azo ampiasaina amin'ny fomba fandidiana kely indrindra.
6. Rafitra fanamafisana orina
Boriborintany mifanila, ny vondrona tsirairay dia tsy miankina amin'izy samy izy, raha simba ny vondrona iray, dia afaka manohy miasa ny hafa, noho izany dia kely ny fiatraikany amin'ny fandidiana.
7. Famantarana herinaratra fanovana marika malaza
Misy karazany roa ny famatsiana herinaratra mifamadika, afa-tsy ireo mahazatra, fiasa miorina ao anatin'ny faritra AC110V-250V, ho an'ireo toerana tena tsy mitombina ny herinaratra, manome famatsiana herinaratra miovaova miaraka amina herin'ny fanoherana mahery vaika izahay.
Remote Control, fanaraha-maso ny rindrina, misy rafitra famerenana bateria azo alaina. Ny fakan-tsarimihetsika namboarina sy ny sandriny fahatelo misy monitor dia safidy manatsara izany.
Jiro LEDD700 LED
Fanamafisana ny hazavana (lux)
Temperature loko (K)
Fanondroana loko (Ra)
Ratio hafanana hatramin'ny hazavana (mW / m² · lux)
Halalin'ny halalin'ny (mm)
Ny savaivon'ny jiro (mm)
LED Quantities (pc)
Fiainana fanompoana LED (h)
Previous: TD-TS-100 Factory Direct Supply Medical Pendant mitambatra ho an'ny Hopitaly
Manaraka: QF-JX-300 China ICU pendant Bridge misaraka amin'ny Bridge ho an'ny hopitaly
Halogen hopitaly DL620 NA fahazavana amin'ny Casters
LEDB740 Wall Mount LED miasa amin'ny jiro ...
LEDL260 CE nankatoavina karazana Type LED fandidiana Exa ...
LEDL700 LED gorodona mitsangana fandidiana hazavana miaraka amin'ny C ...
LEDB260 LED miasa amin'ny fandinihana jiro Wall Type ...
Fivarotana mafana LEDL500 LED azo soloina finday ...
Adiresy: Room 1401, tranobe iraisam-pirenena Shangcheng, No.505, Caoyang Road, Shanghai